प्यारी र स्मार्ट बुहारी बन्ने १० टिप्स, बिहे गरेकालाई अहिलै , बिहे नगरेकालाई पछि काम लाग्छ – OnlinePahar
प्यारी र स्मार्ट बुहारी बन्ने १० टिप्स, बिहे गरेकालाई अहिलै , बिहे नगरेकालाई पछि काम लाग्छ
२८ माघ २०७७, बुधबार १७:१३ Basanta Khanal	0 Comments	buhari tips
के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो । र, यो स्वभाविक पनि हो । जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन् । परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ । अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक परिवेश, फरक रहनसहन, फरक व्यक्तिहरुमाझ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारको रहनसहन बुझेर आफुलाई त्यही अनुरुप प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय बुहारी यस्ता पनि हुन्छन्, जसले परिवारले मान्दै आएको संस्कार अंगाल्न चाहँदैनन् । यसले परिवारमा कलह हुन्छ । तर, कति बुहारी यस्ता हुन्छन्, जसले परिवारलाई थप सुमधुर र बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
घर आफ्नै हो : नव दुलही बनेर जुन घरमा भित्रिएको हो, सुरुवाती दिनहरुमा त्यो घर बिरानो लाग्नसक्छ । त्यहाँको चालचलनमा अभ्यस्त हुन गाह्रो हुनसक्छ । यद्यपी, त्यो घरको साँचो त्यही बुहारीकै हातमा आउने हो र उनैले सम्हाल्ने हो । परिवारलाई कसरी स्वस्थ्य र खुसी राख्ने भन्ने कुरा उनैमा भर पर्छ । यहि मानसिकता बनाएर घर परिवारलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
कसरी जित्ने परिवारको मन ? :
१. सबैभन्दा पहिला सासु र ससुरालाई आफ्नै आमाबुवा सम्झनुपर्छ । आमाबुवालाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । देवर, नन्दलाई भाइ-बहिनीको जस्तै प्रेम गर्ने, मार्गदर्शन दिने । अरु सबैप्रति प्रेमपूर्वक समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
३. तपाईको पतिसँग घरको सबै जिम्मेवारी हुन्छ । यदि तपाईको लागि समय निकाल्न सकेनन् भने रिसाउने वा गलत सोच्ने नगरौ । आखिर पति ले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन तपाईसँग विताउने हो । पति को समस्या, भावना, जिम्मेवारीलाई बुझ्नुहोस् ।
६. घरको चालचलन कस्तो छ, संस्कार के छ भन्ने कुरा जान्नैपर्छ । अतः परिवारको संस्कारलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आफ्नो भूमिका के हुनसक्छ ? खोज्नुहोस् । ७. यदि तपाई खाना बनाउन सिपालु हुनुहुन्छ भने, यहि माध्यामबाट परिवारको मन जित्न सक्नुहुन्छ । उनीहरुलाई मन पर्ने खाना तयार गर्नुहोस् । त्यस्तै घरको सरसफाई, सजावटमा पनि तपाईको कला देखाउनुहोस् ।
यी माथि भनिएका कुराहरुले घर परिवार राम्रो हुन्छ । मानिसहरुलाई लाग्छ, यस्ता पुरातन कुराहरुले मानिसको स्वतन्त्रता लाई खुम्च्याउँछ तर त्यस्तो भन्न पनि गाह्रो छ किनभने मानिसको समाज नै पुराना कुराहरुको जानकारी र पालन गर्ने कुराले नै अगाडी बढेको हो । तर यतिसम्म चै याद राख्नु पर्छ कि पुराना कुराहरुले नयाँ जीवनलाई ध्वस्त नबनाओस् र कसैको पनि राम्रो मनलाई नदुखाओस् । यति कुरा याद गर्ने हो भने घर मात्रै बन्ने होइन कि ति व्यक्ति बसेको घर सँगसँगै समाज र देश नै बन्छ । पक्कै पनि बन्छ ।
← नेपालमा नै मल कारखाना स्थापनाका लागि छलफल हुँदै
टुँडिखेलमा प्रचण्ड–माधव समूहको ‘चौथो चरण’ मानव साङ्लो →
२८ माघ २०७७, बुधबार २२:१५ Basanta Khanal	0